Nchịkọta Omume - ụzọ ndị ọbịa na-aga na otu ha si emekọrịta na ibe ọ bụla bụ data dị oke egwu iji ghọta etu enwere ike isi tinye saịtị gị maka itinyekwu aka na ntụgharị. Ọtụtụ ndị na-eme ọmarịcha chepụta saịtị mara mma ma chefuo na ọ bụ n'ezie ọnụ ụzọ azụmaahịa. Enwere otutu mmụta sayensị na ahụmịhe enwere ike itinye n'ọrụ iji bulie uru nke saịtị gị na azụmaahịa gị.
Ndị isi ahia ego - ma ọ bụ bi nchịkọta na-emezi ihe niile gbasara ọrụ gị, site na ire ahịa na arụmọrụ na njikwa, maka ndị isi na-ahụ maka omume ụlọ ọrụ. BI bu ihe ndi ozo, ndi ozo na ndi oru nlebara anya.
Nchịkọta ọgụgụ isi nke ndị ahịa - ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị arụsi ọrụ ike nyochaa ma ndị ahịa ha na-amasị ha ma ọ bụ na ọ bụghị ihe mgbochi na-egbochi njikọ zuru oke. Usoro ndị na-enye ohere nzaghachi ndị ahịa site na ntanetị mmekọrịta, nyocha na isi ihe nchịkọta data ndị ọzọ nwere ike ịnye nyocha bara oke uru banyere otu esi ahụ ụlọ ọrụ gị yana ihe ị nwere ike ime iji meziwanye ya.
N'ezie, usoro ndị a niile nwere ike ịnye ozi buru oke ibu ma na-eduga na ya nyocha ahumkponwu. Ọ dị mma ịhụ nchịkọta nyiwe mepee API ha ma jikọta ha na ndị ọzọ iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa na-akpaghị aka. Nnukwu nkatọ m na-akatọ nchịkọta nyiwe bụ na ha na-anakọta ma kọọ data, mana ọ naghị adịkarị na-atụ aro. Ihe nyocha nke ntughari na-eme nke ọma - Achọrọ m ka ndị ọzọ! Dịka ọmụmaatụ, anaghị m aghọta ihe kpatara ya nchịkọta nyiwe anaghị enye nghọta maka atụmatụ ọdịnaya ma nye gị ndụmọdụ maka ihe ị ga-ede maka ya.